राष्ट्रियसभा निर्वाचन : प्रदेश नं १ का दुबै स्थानमा वाम गठबन्धन विजयी | Himalaya Post
Posted by Himalaya Post | २४ माघ २०७४, बुधबार १७:५० |
विराटनगर – प्रदेश १ मा राष्ट्रिय सभा सांसदका दुर्इ सिटका लागि भएको चुनावमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु विजयी भएका छन् ।
सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार दुईवटै सिटमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवारहरु विजयी भएका हुन् । दलिततर्फ एमालेका खेम नेपाली ६ हजार २ सय ७० मत ल्याएर विजयी भएका छन । उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका बिन विश्वकर्माले दुई हजार ८३२ मत प्राप्त गरे । उक्त पदमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ९ र प्रदेशसभाको एक जनाको मत बदर भएको छ ।
यस्तै अपांगतारअल्पसंख्यक पदमा पनि वाम गठबन्धनकै अगमप्रसाद बान्तवा राई बिजयी भएका छन । राईले ६ हजार १३८ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका महेश जाजुले २ हजार ८९८ मत प्राप्त गरे । यो पदमा स्थानीय तहका १० र प्रदेशसभाका २ जनाको मत बदर भएको छ ।
यस्तै खुल्ला तर्फ वाम गठवन्धनका हरिचरण शिवाकोटी, पर्शुराम मेघी गुरुङ र नेपाली कांग्रेसका रमेशजंग रायमाझी पनि निर्विरोध भएका हुन् ।
विजयी उम्मेदवारलाई भोलि प्रमाणपत्र प्रदान गरिने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
Previousसम्बन्ध विच्छेद गर्न नमान्दा जलाएर हत्याको प्रयास
Nextप्रहरी प्रधान कार्यलयद्वारा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित
किन लुकाईयो नेपाल आईडलमा प्रतिस्पर्धीहरुले पाएको भोटसंख्या ? नेपाली तारा प्रताप लामा पनि बाहिरिए !
९ असार २०७४, शुक्रबार १८:०६
गाडीमा बम प्रहार हुँदा रामचन्द्र पौडेललाई के भयो ?
२ मंसिर २०७४, शनिबार १५:१६